Dadweynaha Magaalada Burco oo Biyo Yaraan Ka Cabanaya – Goobjoog News
Dadweyne ku dhaqan magaalada Burco ayaa ka cabanaya biyo yaraan soo waajhaday magaalada 6-dii bilood ee ugu dambeysay noloshoodana saamayn xoog leh ku yeelatay.
Dadweynahan oo labo jeer oo kala duwan la hadlay warbaahinta, ayaa waxay sheegeen in lixdii bilood ee ugu dambeysay ay ka cabanayeen biyaha ay booyaduhu keenaan magaalada oo qiimohoodu aad u sarreeyo marka loo fiiriyo hayntooda dhaqaale.
Cabdi Warsame oo ka tirsan odayaasha Burco ayaa sheegay in qoyskiisa ay nolol ahaan taabatay biyo yaraanta ka jirta Burco, “ Waxaan ka cabanaynaa biyo yaraan oo maba helno gaar ahaan Lixdii bilood ee ugu dambeysay, waxa dhacda In booyadda dalabka ah nagala daahdo inay biyo noo keento qaali haba ahaatee way la daahaysaa oo meel durugsan ayay ka soo dhaaminayaan” ayuu Sheegay Cabdi Warsame .
Cabashadan biyaha ayaa todobaadkii hore mar odayaal la kulmeen maareeyaha wakaaladda biyaha Burco oo ay weydiiyeen biyo yaraanta waxa sababay uu ku sheegay in labo ka mid ah afar ceel oo magaaladu biyo ka helaysay muddo dheer ay hadda ciladoobeen, balse waxa uu ballan qaaday in si degdeg ah loo dayactiri doono. Laakiin waxay odayaashani warbaahinta u sheegeen inaanu waxba ka qabanin maareeyuhu ballanqaadkii uu sameeyay.
Gobolka Togdheer ee Burco caasimadda u tahay ayaa ah gobol deegaan xoolo dhaqato ahi ku xeeran yahay kaasi oo biyaha yaallaana ayna u wada qaybsami karin dadka iyo xoolaha.
Boko Haram Oo Baahisay video-ga Gabdho Ay Afduubteen